संक्रमितको बच्चा ‘स्वस्थ’ – sunpani.com
संक्रमितको बच्चा ‘स्वस्थ’
नेपालगञ्ज – नवविवाहित जोडी । केही समयपछि श्रीमान बिरामी भए । रगत जाँच गरियो । उनमा एचआइभी संक्रमण देखियो । परिवारमा खैलाबैला मच्चियो ।
संक्रमित उनी भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा ‘एआरटी’ खान पुगे । नियमित ६ महिना औषधी खाएपछि उनको ‘भाइरल लोड’ जाँच गरियो । यो अवधिमा उनको भाइरल लोड नगन्य अवस्थामा देखियो । नगन्य मात्रामा झरेपछि रोग सर्ने चान्स न्यून हुन्छ । यही भएर पछिल्लो समयमा ‘न बराबर न’ (नगन्य बराबर नसर्ने) को सूत्र अघि सारिएको छ ।
नयाँ दम्पतिलाई बच्चा त चाहिएकै थियो । संक्रमित श्रीमानबाट जन्मेको बच्चा पनि संक्रमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । ६ महिना नियमित औषधी खुवाएर भाइरल लोड जाँच भइसकेपछि चिकित्सकले उनलाई बच्चा जन्माउन सल्लाह दिए । भेरीमै सञ्चालनमा रहेको ‘पीएमटीसिटी’ सेवा लिएर ती दम्पतिले बच्चा जन्माए । छोरा (बच्चा) नेगेटिभ जन्मियो । नवविवाहत जोडीमात्रै होइन, घरपरिवारमा खुशीको सीमा नै रहेन ।
यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । पछिल्लो वर्षमा संक्रमितले पनि ‘स्वस्थ’ बच्चा जन्माइरहेका छन् । खाली संक्रमित दम्पतिले चिकित्सकको सल्लाह मान्नु पर्छ । उनीहरुले भने अनुसारको औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।
वि.सं. २०६६ सालदेखि भेरी अस्पतालमा पीएमटीसिटी कार्यक्रम चलिरहेको छ । अस्पतालका एआरटी काउन्सलर इन्द्र सैनीले अहिलेसम्म ७० जना संक्रमितले बच्चा जन्माइसकेको जानकारी दिनुभयो । गतवर्षमात्रै १४ जना संक्रमितले बच्चा जन्माएका थिए । त्यसमा एक बच्चा संक्रमित जन्मियो । सैनीका अनुसार, संक्रमित बच्चा जन्माउने दम्पति अन्तिम समयमा मात्रै अस्पतालको सम्पर्कमा आइपुगेका थिए । पहिला नै सम्पर्कमा आएको भए संक्रमित बच्चा जन्मिदैनथ्यो ।
भेरीका डा. संकेत रिसालले पछिल्ला दिनमा एआइभी संक्रमण ‘सामान्य’ रोगजस्तै मानिन थालेको बताउनुभयो । अस्पतालका फोकलपर्सन डा. रिसालले बच्चा जन्माउन चाहने संक्रमित दम्पतिहरु समयमा अस्पतालमा आएर भनेअनुसार औषधी सेवन गर्दा नै ‘निरोगी’ बच्चा जन्माउन सक्ने बताउनुभयो ।
एचआइभी असुरक्षित यौन सम्पर्कले बढिरहेको छ । कतिपय लागु औषधी प्रयोगकर्ताले एउटै सुई धेरैले प्रयोग गर्दा संक्रमित भएका छन् । भेरीमा अहिलेसम्म एक हजार दुई सय ६५ जनाले एआरटी सेवा लिएका छन् । तीमध्ये केहीको मृत्यु भयो । केही अन्यत्र गए । केही नियमित सम्पर्कमा आउन छोडे । एआरटी काउन्सलर सैनीका अनुसार, अहिले भेरी अस्पतालबाट ४ सय ७१ जनाले नियमित एआरटी सेवा गरिरहेका छन् । ती मध्येमा ८८ प्रतिशतको भाइरल लोड नगन्य मात्रामा पुगेको छ । नगन्यमात्रामा पुग्नु भनेको नसर्ने अवस्थामा रहनु मानिन्छ ।
अझै पनि संक्रमितहरु खुल्न भने सकेका छैनन्, केही अभियान्ताबाहेक । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआउदा उनीहरु लुकिरहेका छन् । यद्यपि, बाँकेमा संक्रमितहरु राम्रा राम्रा व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । संक्रमितले बच्चा जन्माएर एचआइभीलाई पुस्तामा सारिरहेका छन् भन्ने धारणा बदलिरहेको छ । चिकित्सकले नै कार्यक्रमहरु गर्दै नियमित सम्पर्कमा आएर औषधी खाने संक्रमितले जन्माएको बच्चा निरोगी जन्मिने बताइरहेका छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ ।